Warbixin: Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte oo doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Juventus. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Warbixin: Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte oo doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Juventus.
Warbixin: Macalinka kooxda Chelsea Antonio Conte oo doonayo inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Juventus.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 9-06-16 12:38 PM Garabka duula ee kooxda Juventus Steohan Lichtsteiner ayaa lasoo tabinayaa iney macquul tahay inuu xagaagan usoo dhaqaaqo horyaalka Ingiriiska.
Macalinkii hore ee kooxda Juventus Antonio Conte ayaa si rasmi ah ula wareegi doono shaqada macalinimo ee kooxda Chelsea marka uu soo idlaado koobka qaramada Yurub, waxaana la fahansan yahay in macalinkan reer Talyaani uu doonayo inuu dib ula midoobo daaficiisii hore.
Kwadwo Asamoah ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa kooxda ka dhisan Stamford Bridge, balse sida lagu xusay wargeyska SUN Conte ayaa ku dhaw inuu dalab 12 Milyan oo ginni u gudbiyo kooxdiisii hore isaga oo ka doonayo inuu kasoo qaado Lichtsteiner, kaasoo awooda inuu ciyaaro dhowr boos oo daafaca ah.
waxaa xusid mudan in 32 Sano jirkan u dhashay dalka Switzerland ayaa la jooga kooxda Juventus shan
xilli ciyaareed isaga oo kusoo biiray xagaagii 2011 ka.